Etu esi ere na ntanetị ma nwee ọganiihu n'ihe ị na-eme | ECommerce ozi ọma
Ọtụtụ mmadụ na-ahụ ikike ịntanetị nwere ire. Ma ọ bụ na, ọ bụghị naanị n’ihi na ndị mmadụ na-ejikọ ha ọnụ, kama ọ bụ n’ihi na ọ bụ ụzọ iji ruo ọtụtụ ndị ọzọ. Intanet na-enye mmadụ niile ohere. Nke ahụ na-enyekwa ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ gị iru ọtụtụ akụkụ, ọ bụghị naanị n'obodo ebe etinyere gị. Ma, otu esi ere online?
Ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị ga-eme, ma ọ bụ otu esi enweta ihe ịga nke ọma na "ụwa macro" a, taa anyị ga-akọwa ntuziaka ndị a ịmụta otú e si ere online. Just ga-agbadata ọrụ.
1 Otu esi ere online: usoro ndị gara aga
1.1 Chee echiche banyere ihe ị na-aga ire n'onlinentanet
1.2 Gbalịa ịkọwa onwe gị
1.3 Emela ngwa ngwa
2 Otu esi ere n'onlinentanet: ọwa ahịa
2.2 Storelọ ahịa n'ịntanetị
2.4 Netwọk mmekọrịta
Otu esi ere online: usoro ndị gara aga
Ọ dị mma nke ukwuu, ị kpebiela ịbanye ụwa dijitalụ ma tinye ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ gị n'ahịa. Ma olee otu esi eme ya? Ọtụtụ na-arahụ iji wuo weebụsaịtị wee chee na, na ịnwe ọnụnọ na Internetntanetị, ha ga-enwerịrị ahịa. Na nke ahụ rụrụ ọrụ na mmalite nke afọ dijitalụ, mana ọ bụghị ugbu a. Ọ bụrụ n'ịchọpụta, maka ahịa ọ bụla enwere ọtụtụ puku ụlọ ahịa, ibe na ọnụnọ ndị ọzọ na weebụ na-ere ngwaahịa. Nke ahụ sụgharịrị n'ọtụtụ asọmpi.
Yabụ, tupu itughari "Akụkọ Milkmaid ahụ" na ndụ gị, gịnị kpatara na ị gaghị ewere ụfọdụ usoro gara aga na akaụntụ?
Chee echiche banyere ihe ị na-aga ire n'onlinentanet
A ghaghi ikwu na Azụmaahịa ahịa jupụtara nnọọ taa. Ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ eletriki, ọtụtụ ihe eji egwuri egwu, uwe ... Yabụ, ọ bụrụ na ị banye ahịa ebe ụlọ ahịa x na-achị ya, kedu ka ị ga-esi soro ha mpi? Ha nwere agadi, ezigbo (na ndị kwesiri ntụkwasị obi) ndị ahịa, yana ahịa na-ekwe nkwa uru ma nwee ike itinye ego na mgbasa ozi.
N'okwu a, ọ ka mma ịhọrọ obere niche, ọ bụrụhaala na ị nwere ike ree ngwaahịa ndị ahụ yana na ha dị mma, na mgbakwunye na ịghọta ahịa ahụ.
Gbalịa ịkọwa onwe gị
Kedu ihe mere ngwaahịa gị ji dị iche na ndị ọzọ? Nke ahụ bụ ihe ị ga - agba ume mgbe ị matara etu esi ere na ntanetị. Elela ego, kama ihe ị nwere ike nye mmadu uru ma oburu na o choro maka ngwa ahia gi ọ bụghịkwa nke asọmpi ahụ.
Emela ngwa ngwa
Ime ihe ndị na-agba ọsọ ga-eme ka ha daa. Na ọnụnọ na hasntanetị ga-arụ ọrụ zuru oke. Iji maa atụ, were ya na ị wuuru ibe na mgbe ha gara ịzụta ngwaahịa ahụ, ọ naghị arụ ọrụ, ma ọ bụ na ọ naghị enye obi ike ịzụta. Ọ ga-abụ ngụkọta ọdịda.
Ya mere, ị ga-emepụta ọwa ahịa ahịa nke ọma, ebe ọ bụ ọ bụghị naanị na ị nwere ibe weebụ (ụlọ ahịa dị n'ịntanetị) ịre, e nwere ọtụtụ ụzọ anyị ga-esi kwuo maka nke na-esote.
Otu esi ere n'onlinentanet: ọwa ahịa
Tupu mgbe ahụ, anyị nwere ike ịsị na naanị otu ụzọ isi ree bụ site na ụlọ ahịa n'ịntanetị. Nke bu eziokwu bu na anyi mehiere. Ihe a bụ na hasntanetị bụ ebe dị iche iche na, ebe ọ bụla, ị nwere ike ree ngwaahịa gị. N'ezie, ndị a bụ ọwa nke, ọbụlagodi taa, ka bụ ezigbo isi mmalite ndị ahịa:
Nzukọ a bụ otu n'ime nyiwe isi mgbe startedntanetị malitere ire. N'ezie, ọ ghọrọ ezigbo ebe ịzụrụ na ire, ndị aka abụọ (ndị rere ngwaahịa ha) na nke ọhụrụ.
Mgbe ha hụrụ ikike ahụ, a gbara ọtụtụ ndị nwere ụlọ ahịa ma ọ bụ blọọgụ ume ka ha sonyere na nnọkọ a ma degara ha akwụkwọ iji kpọsaa ngwaahịa ha. Ugbu a, agbanyeghị na enyere ndị mmadụ ohere ire ahịa, n'ihe banyere ụlọ ọrụ ọ naghị adị mfe n'ihi na ha hụrụ na ha na-etinye aka na ọgbakọ a. Mana ọ bụ nhọrọ ịre, ọkachasị ma ọ bụrụ na ihe ị ga-arụ ọrụ bụ ngwaahịa aka abụọ.
Storelọ ahịa n'ịntanetị
Ọ bụ ikekwe otu n'ime nhọrọ kacha mma taa. Ma kwa ebe ị ga-ahụ ọtụtụ asọmpi. Tụkwasị na nke a, ọ bụghị ihe dị ọnụ ala n'ihi na ịmepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị chọrọ itinye ego na, dabere na mmefu ego gị, ga-adị elu ma ọ bụ dị ala.
Mepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ike ịme n'ọtụtụ ụzọ: Mee ya n'onwe gị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọmụma zuru oke iji melite ya, ọbụlagodi iji ndebiri dị ka WordPress na Woocommerce; rịọ maka ọrụ ọkachamara (ọ ga-adị oke ọnụ mana ị nwere nkwa ndị ọzọ na ị gaghị ada); ma ọ bụ jiri ụlọ ọrụ ndị guzobere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na sava ha (ị ga-atụle ma ọ ga-arụ ọrụ maka gị ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ, emeghị ọnọdụ ahụ maka nke a).
Tupu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị amụba, e nwere blọọgụ iji jupụta ebe ahụ. Ma ọ bụ na n'ime blọọgụ ị nwere ike ikwu maka ọtụtụ ihe, ma ree. N'ezie, taa ị pụkwara.
Netwọk mmekọrịta bụ otu n'ime ndị, na nso nso a, etinyela batrị n'usoro ịre n'ịntanetị. Ma ọ bụ na Facebook na Instagram enweworị nhọrọ ịre, na ndị ọzọ ga-esonye n'oge na-adịghị anya.
Mgbe a bịara n'ịre site na netwọkụ mmekọrịta, ị nwere uru ahụ ịkwesighi inwe ibe weebụ. Nwere ike ịmepụta katalọgụ gị na ibe Facebook wee bido ịzụ ahịa na ire site na ya. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ngwaahịa gị lekwasịrị anya na ndị ahịa (ma ọkachasị ebe ọ bụ na onye ọ bụla nọ na mgbasa ozi mmekọrịta).
Anyị echekwala nke a maka nke ikpeazụ, mana n'eziokwu, ha bụ ebe, n'oge na-adịghị anya, ị nwere ike ịkwụsị n'ime ha iji ree ngwaahịa gị.
Ma Amazon ma AliExpress, Ebay na ọtụtụ aha ndị ọzọ “buru ibu” nke anyị hapụrụ onwe anyị, bụ otu isi iyi nke ahịa ị nwere ike iburu n'uche. Ma n'eziokwu, ha abụghị nanị, ya bụ, ị nwere ike ịdenye aha dị ka onye na-ere ahịa na nyiwe ndị a ma n'otu oge ahụ na-ere site na ọwa ndị ọzọ.
N'ezie, ị kwesịrị iburu n'uche oke ha na-arịọ maka ire, ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na ịnwetaghị uru na ha, mgbe ụfọdụ ọ ka mma ịhapụ ha. Mana ha bụ ebe ọtụtụ mmadụ na-abanye, ọkachasị na Amazon, na site na ịkọwapụta atụmatụ nke na-eme ka ị pụọ iche na ndị asọmpi gị, ị nwere ike nweta nsonaazụ.
Otu ihe a ga - eme na usoro ịre ahịa aka abụọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ihe ị ga - eresị bụ ngwaahịa ndị ị na - anaghị eji ma ọ bụ raara onwe ha nye ngwaahịa ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Otu esi ere na ntanetị
Etu esi azụ ahịa Instagram ka ere